Helitaanka Nabadda Gudaha, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Raadinta nabad gudaha
Waa inaan qiraa in mararka qaar ay igu adkaato inaan nabad helo. Kama hadlayo "nabad ka fog fahamka" (Filiboy 4,7 Tarjumaadda New Geneva). Markaan ka fikiro nabada noocaas ah, waxaan qiyaasayaa in ilmuhu xasilinayo Ilaah dhexdeeda duufaanta. Waxaan ka fekerayaa tijaabooyin adag kuwaas oo muruqyada aaminaada lagu tababbaray ilaa ay gaaraan halka loo yaqaan 'endorphins' (hormoonnada farxadda leh ee jidhka) ee "nabadda" waxtarkooda. Waxaan ka fikirnaa dhibaatooyinka oo beddelaya aragtidayada oo nagu qasbaya dib u qiimeynta waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha oo aan uga mahadcelino iyaga. Markay dhacdooyinka noocan oo kale ahi dhacaan, waxaan ogahay inaanan wax xukun ah ku haynin sida ay u soo afjarayaan. In kasta oo ay kiciyaan waxa ugu hooseeya, waxaa si fudud uga habboon in waxyaalahan oo kale loogu tago Ilaah.
Waxaan ka hadlayaa nabada "maalin walba", oo dadka qaarkiis loogu yeedhi karo nabad maskaxeed ama nabad gudaha. Siduu falsafad caan ah Anonymus mar u yidhi: - Ma aha buuraha idinka horreeya oo idin dhibaya. Waa hadhuudhka cammuudda kabahaaga ”. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah miraha ciiddayda: fikradaha walaaca leh ee i hareereeya, waxaan ka walaacsanahay sabab la'aan oo aan uga fekero waxa ugu xun halkii kuwa ugu wanaagsan ee kaneecada loogu beddelo maroodiga; hanuunintaada waa iga lumaa, waan xanaaqaa maxaa yeelay waxbaa iima qalmaan. Waxaan rabaa in aan garaaco dad naxariis la’aan ah, xeeladaysan ama xanaaq badan.
Nabadda gudaha waxaa loo yaqaan xasilloonida kala dambeynta (Augustine: tranquillitas xeeris). Hadday taasi run tahay, nabad ma jiri karto halkaas oo aysan jirin nidaam bulsho. Nasiib darrose, inta badan nolosheenna ayaannan habbooneyn. Noloshu badanaa waa rabsho, dhib badan iyo walbahaar. Qaarkood waxay raadsadaan nabad oo ay ka baxaan gacanta iyagoo cabbaya, isticmaalay maandooriyeyaal, lacag ururinaayo, waxyaabo iibsanaya, ama wax cunaya. Meelo badan oo noloshayda ah oo aanan gacanta ku haynin ma jiraan. Si kastaba ha noqotee, markii aan isku dayo inaan sameeyo qaar ka mid ah laylisyada soosocda ee noloshayda, waxaan ku heli karaa xoogaa nabad ah, xitaa meeshii aan xakamayn ka helin.
Waan daryeelayaa arimahayga.
Waan cafiyaa dadka kale iyo naftayda.
Waan iloobay wixii tagay oo aan sii waday!
Ma lihi. Waxaan baranayaa "Maya!" in la dhaho.
Waan ku faraxsanahay dadka kale. Ha ka masayrin.
Waan aqbalay wixii aan la beddeli karin.
Waxaan baranayaa samir iyo / ama dulqaad.
Waxaan fiiriyaa ducadayda oo waan u mahadnaqayaa.
Waxaan u doortaa saaxiibbo xikmad leh oo ka fog dadka xun.
Wax walba si shaqsi ah uma qaato.
Noloshayda ayaan u fududaynayaa. Waxaan ka takhalusaa tuugta.
Waxaan bartaa qosol.
Noloshayda waan ka gaabiyaa. Waxaan helaa waqti deggan.
Waxaan u sameeyaa wax fiican qof kale.
Waxaan u maleynayaa ka hor intaanan hadlin.
Si kastaba ha noqotee, kani waa fududahay in la sheego intii la qaban lahaa. Waxay u egtahay in haddii aanan ka yeelin waxa kor ku xusan culeyska fekerka, ma ihi cid kale oo aan eeddaro mooyee. Waa laga gudbi kari lahaa dhibaatada oo u horseeday xal wanaagsan.
Waxaan ka fekerayaa: ugu dambeyntii, nabad oo dhan waxay ka timaadaa xagga Ilaah - nabad ka timaadda dhammaan waxgarashada iyo nabadda gudaha. Xiriir la'aan ilaah ma helidoonno nabad dhab ah. Ilaahna nabad buu siiyaa kuwa isaga isku halleeya (Joh 14,27) iyo kuwa isaga isku halleeya (Ishacyaah 26,3) si aysan ugu dhicin wax walwal ah (Filiboy 4,6). Ilaa aan ka midaysnaano Ilaah, dadku si aan micne lahayn bay nabad u raadiyaan (Jer 6,14).
Waxaan arkaa inay tahay inaan dhegeysto codka Ilaah oo sii caroodo - oo aan ka fogaado kuwa aan taxaddar lahayn, xeeladeysan ama dadka careysan.
Hal fikir dhamaadka
Ciddii kaa xanaaqda ayaa kaa xukuma. Ha u ogolaan dadka kale inay xadaan nabaddaada gudaha. Nabad ku noolaada